Fanafihana taksiborosy : maty voatifitra ny DGAT an’ny Faritra Melaky | NewsMada
Fanafihana taksiborosy : maty voatifitra ny DGAT an’ny Faritra Melaky
Tsy fandriampahalemana! Notafihin’ny jiolahy ny fiara mpitatitra iray, niala tany Tsiroanomandidy ho any Maintirano. Maty voatifitra tamin’izany ny DGAT faritra Melaky sy tovolahy iray teo anilany. Fanindroany tao anatin’ny herinandro ity fanafihana ity.
Taksiborosy iray mampitohy an’ny faritra Bongolava sy Maintirano notafihan-jiolahy, ny asabotsy hariva teo, tokony ho tamin’ny 5 ora, ka nahavoatifitra olona roa. Teo amin’ny toerana iray antsoina hoe Bekodobo no nisehoan’ny fanafihana. Araka ny fanazavana azo, nitifitra avy hatrany ireo olon-dratsy raha vao nahatazana ny fiara. Nahay niepoka anefa ilay mpamily, izay voalaza fa nokendren’ireo jiolahy, ka ireo mpandeha roa lahy teo akaikiny indray no voan’ny bala. Samy voa teo amin’ny lohany izy ireo, ary maty tsy tra-drano. DGAT (directeur général de l’administration territoriale) ao amin’ny faritra Melaky ny iray amin’ireo, ary tovolahy mpampandihy ny faharoa.
Tsy nijanona ny fiara na teo aza izany fa vao maika nirifatra nitsoaka, ary namonjy tany Morafenobe avy hatrany. Namonjy ny zandary avy hatrany ilay taksiborosy, ary hita maty voatifitra teo amin’ny lohany ireto mpandeha roa lahy. Nidina tany amin’ilay toerana nitrangan’ny fanafihana ny zandary, ary nanao ny fanarahan-dia tany amin’ny tanàna manodidina eo. “Roa lahy no tazan’ny mpamily teo amoron-dalana. Mody nitafy bodofotsy izy ireo, ary raha vao nahatazana ny fiara, namoaka basim-borona ary nitifitra avy hatrany”, hoy ny fanazavan’ny zandary.
Araka ny fantatra ihany koa, mpividy omby tao Tsiroanomandidy no tena nokendren’ireo jiolahy tamin’izao fanafihana izao. Tao anaty taksiborosy ireo, saingy tsy naninona fa avotra soa aman-tsara noho ny ezaky ny mpamily.
Matetika ny fanafihana
Araka ny fanazavana azo, matetika isehoana fanafihana amin’ny lalam-pirenena avy ao Tsiroanomandidy mihazo an’i Maintirano iny. Vao herinandro lasa nisehoana fanafihana kamiao mpitati-bokatra iray, tsy lavitra ity niseho ny asabotsy lasa teo ity. Voalazan’ny mpampiasa lalana, fa noho ny faharatsian’ity lalam-pirenena ity no anisan’ny mampirongatra ny fanafihana. Eo ihany koa ireo mpividy omby mivezivezy amin’iny faritra iny izay mahasarika ny jiolahy.
Efa nanaovan’ny zandary hetsika “coup d’arrêt” ihany tamin’iny faritra iny tamin’ny taon-dasa, noho ny firongatry ny asan-dahalo amin’ireo faritra roa, Bongolava sy Melaky. Nangingina ny asan-dahalo, fa ity fanafihana fiara ity no tena mahazo vahana. Mitaraina ny olona noho izany, ary miandry izay hetsika ataon’ny zandary indray. Efa mihatra aman’aina rahateo ny fanafihana.